संरचना नै त्रुटिपूर्ण | गृहपृष्ठ
Home सम्पादकीय संरचना नै त्रुटिपूर्ण
on: ५ फाल्गुन २०७५, आईतवार ०५:५२ सम्पादकीय
संरचना नै त्रुटिपूर्ण
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (अदुअआ)का एक आयुक्तले घूस खाएको आरोप लागेपछि आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका छन् । उनको राजीनामाले धेरै प्रश्न उब्जाएको छ– घूस लिएको आरोप लागे पनि ४ महीनासम्म यो किन र कसरी गुपचुप राखियो ? घूस खाएको समाचार सार्वजनिक भएपछि मात्रै महाभियोगको हल्ला किन चलाइयो ? राजीनामा दिएपछि उनीमाथि छानविन हुन्छ कि हु“दैन ? घूस दिने व्यक्तिमाथि नै पनि छानविन हुन्छ कि ? भ्रष्टाचार विरुद्ध अनुसन्धान गर्ने सर्वोच्च निकायका उच्च व्यक्ति नै भ्रष्टाचारमा लिप्त हुन्छन् भने तिनको निगरानी कसले गर्ने ?
आयोगमाथि चाहिँ कसले निगरानी गर्ने भन्ने स्पष्ट छैन । त्यसैले भ्रष्टाचार विरुद्धको नेपालको संयन्त्र र अभ्यास नै गलत देखिन्छ ।
भ्रष्टाचारको निगरानी गर्ने जिम्मा पदीय जिम्मेवारी बोक्ने व्यक्तिभन्दा माथिल्लो अधिकारीको हो । जस्तै खरदार–सुब्बाले भ्रष्टाचार नगरून् भन्ने निगरानी सम्बद्ध कार्यालय प्रमुखले गर्छन् भने त्यो माथिको निगरानी अझ माथिका अधिकारीले गर्नुपर्छ । यसै गरी सबै कार्यालयमा हुन सक्ने भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्ने निकाय अदुअआ हो । अदुअआ माथि नै चाहिँ कसले निगरानी गर्ने भन्ने स्पष्ट छैन । त्यसैले भ्रष्टाचार विरुद्धको नेपालको संयन्त्र र अभ्यास नै गलत छ । अदुअआमा जुन प्रक्रियाबाट प्रमुख आयुक्त र अन्य आयुक्त नियुक्त गरिन्छन् त्यो प्रक्रियामा पनि त्रुटि छ । संसद्मा गरिने सार्वजनिक सुनुवाइको प्रक्रिया औपचारिकता जस्तो मात्रै देखिन्छ । हो, शुद्ध मन भएका आचरणयुक्त कुनै व्यक्ति यहाँ नियुक्त भएछन् भने भ्रष्टाचार विरुद्ध कठोरताका साथ काम गर्लान् ।
अदुअआमा नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया नै यस्तो बलियो खालको हुनुपर्छ, जसले गर्दा खराब नियत भएका मानिसले नियुक्ति नै पाउन नसकून् । नियुक्ति पाउने व्यक्तिलाई पदीय जिम्मेवारी यसरी बोध गराउन सकियोस् जसले गर्दा ऊ भ्रष्टाचार गर्नेतर्फ सोच्नै नसकोस् । यसका लागि सार्वजनिक सुनुवाइबाट नियुक्त हुने पद राष्ट्रिय इज्जतको पर्याय मानिनुपर्छ । यस्तो पदमा नियुक्ति पाउने व्यक्तिलाई धेरै तलबसुविधा पनि दिन सकिन्छ । तर, उसको आचरणबारे सर्वसाधारणले निरन्तर जानकारी पाउनुपर्ने प्रावधान भने राखिनुपर्छ ।
नेपालको कानूनी व्यवस्था अनुसार कुनै पनि व्यक्तिलाई एउटै अभियोग दुईपटक लगाउन सकिँदैन । त्यसैले अदुअआले भ्रष्टाचारी विरुद्ध कमजोर मुद्दा चलाएर उनीहरूलाई ‘क्लिन चीट’ दिएको आरोपसमेत लाग्ने गरेको छ । समाचारमा आएको तथ्य, आयोगमा परेको उजुरी र आयोग आफैलाई शंका लागेको अवस्थामा भ्रष्टाचारबारे छानविन गर्न सक्छ । तर, उजुरी परेको अवस्थामा वा राजनीतिक नेतृत्व गर्नेले अह्राएको अवस्थामा बाहेक आयोगले अनुसन्धान गरेको पाइ“दैन । त्यसैले अदुअआको अहिलेको संरचना नै गलत छ । यदि अदुअआले एम्बुडस्म्यान प्रणाली अनुसार काम गर्ने हो भने भ्रष्टाचारको अनुसन्धानको प्रणालीमै परिवर्तन हुन्छ र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने नियामक व्यक्तिले नै भ्रष्टाचार गर्ने सम्भावना रहँदैन । एम्बुड्स्म्यान प्रणालीमा जाँदा यसले भ्रष्टाचारको शंका लागेको कुनै पनि क्षेत्रको अनुसन्धान गर्छ र त्यसको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्छ । यस प्रतिवेदनका आधारमा कसैले चाह्यो भने अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्छ । यसले शंकास्पद अधिकारीका बारेमा अनुसन्धान गर्न अन्य निकायलाई रोक्दैन पनि ।
जेहोस्, भ्रष्टाचारको भयावह स्थितिले अहिले नेपालले भ्रष्टाचार विरुद्ध अपनाएको पद्धति गलत छ भन्नेचाहिँ प्रमाणित गरिसकेको छ । त्यसैले आयोगमा नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया होस् वा यसको संरचना परिवर्तन अथवा अन्य कुनै ठूलै संरचनागत परिवर्तन नगरी भ्रष्टाचारलाई न्यून गर्न सकिँदैन । यसतर्फ नयाँ बहस थाल्नुपर्ने आवश्यता टड्कारो देखिएको छ ।
करअधिकृत मानप्रसादविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा, १ करोड ८२ लाख कमाइ अवैध
८ चैत्र २०७५, शुक्रबार १८:०९
८ चैत्र २०७५, शुक्रबार १३:४७
विद्युत प्राधिकरणका लेखापालविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर
४ चैत्र २०७५, सोमबार १९:०१
१ चैत्र २०७५, शुक्रबार १७:२९